कसरी तय गर्दैछ राजपाले उम्मेदवार? :: सुजिता कार्की :: Setopati
कसरी तय गर्दैछ राजपाले उम्मेदवार?
सन्जिब बगाले काठमाडौं,भदौ ९
राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा)नेपालले आसन्न निर्वाचनको लागि उम्मेदवार टुंगो लगाउन कार्यविधि बनाAll Postsएको छ ।
उम्मेदवारको तय गर्न राजपाले असोज २ गते निर्वाचन हुने दुई नम्बर प्रदेशका ८ जिल्लामा पर्यवेक्षकहरू पठाएको छ । प्रत्येक जिल्लामा खटिएका पर्यवेक्षकले प्रत्येक स्थानीय तहमा पर्यवेक्षक पठाउने अध्यक्ष मण्डलका राजेन्द्र महतोले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
‘हामीले आठ जिल्लामा आठ जना पर्यवेक्षक पठाएका छौँ। उनीहरूले स्थानीय तहमा पर्यवेक्षक पठाउनेछन्,’महतोले भने,‘स्थानीय तहमा गएका पर्यवेक्षकले इच्छुक उम्मेदवारहरूको नामावली संकलन गर्छ । उम्मेदवार फारम पनि वितरण हुन्छ । फारम संकलन भएपछि सहमतिको वातावरण बनाउँछ । त्यसलाई जिल्लामा ल्याइन्छ ।’
स्थानीय तहबाट आएको नामहरूको जिल्लाबाटै सहमतिका आधारमा टुंगो लगाउने राजपाले जनाएको छ । सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गर्दा पनि जिल्लाबाट टुंगो लाग्न नसके केन्द्रमा आउने महतोले बताए । केन्द्रमा आएपछि अध्यक्ष मण्डलले यसलाई टुंगो लगाउने बताए ।
उनका अनुसार आन्दोलनमा सहभागी भएको, जित्न सक्ने, समाजमा लोकप्रिय र सक्षम भएकालाई उम्मेदवार बनाइने छ।
‘हामीले सबै पक्ष हेरेर उम्मेदवार बनाउँछौ र सहमतिका आधारमा गर्छौं,’ उनले भने,‘कोही बागी उठ्यो भने त्यसलाई जनताले बहिष्कार गर्छन्। जनताले उसलाई मान्यता दिँदैनन्, अस्वीकार गर्छन्।’
राजपा अहिले पनि एकताबद्ध रहेको भन्दै निर्वाचनले यसलाई अझै बलियो बनाउने उनले दावी गरे।
स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन बहिष्कार गरेको राजपाले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा निर्णयार्थ पेश भएपछि निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको हो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ ९, २०७४, ०३:५८:३८